Plumbing ekhaya lakho kufanele kukhethwe hhayi kuphela design, kodwa uma kukhethwe kufanele bacabangele eziningi nemingcele lobuchwepheshe ezithinta ukusebenza kanye nemikhiqizo umsebenzi wezinga eliphakeme. Ngokwesibonelo, i-ukubaluleka WC kakhulu ukusebenza evamile esebenza ngamanzi has. Kuhlanganisa izinqubo okuphakelayo, namanzi ngamanzi khulula.
Khipha amanzi esitsheni yangasese kuyinto ovundlile, etshekile futhi mpo. Isibonelo salokhu kwamuva, nezitsha ukukhonza ngamanzi esidayisa mpo ngaphandle endaweni yokuchitha indle. Indawo osenyameni ipayipi uchaza kwalapho nge yangasese indle.
Nge ukukhululwa ovundlile - yesikhuphukeli elise odongeni, futhi uxhumano senziwa ezishaywayo ne, noma kancane. Lapho etshekile - ukuxhumeka ngisho aphansi, tube itholakala i-engela degrees 30. Lokhu okufana kuvamile amakhaya imodeli. It ikuvumela ukuthi usebenzise ezihlukahlukene onobuhle temathoyilethi.
Izici mpo osenyameni amanzi
Kuhilela ukubhekana kwakwakhe oveza amapayipi, ngokufanele phansi engezansi isikhuphukeli, noma uma kuwukuthi izakhiwo agqagqene futhi phansi (at eqinile). i samuntu okunjalo luncanyelwa amakhaya "uStalin" kanye Cottages zwe.
Uma indle risers elise phansi, ethoyilethi zingasuswa endaweni efanele, isibonelo, ukufaka zangasese , esidayisa mpo maphakathi iyunithi sanitary. Lokhu izimfashini zamuva fashion design.
Izinzuzo imikhiqizo amapayipi nge outflow mpo yamanzi.
Inketho for izindlu zasemaphandleni futhi zokuhlala ezindala.
ukusebenza Cishe buthule ohlelweni. It kungaba umsindo kancane amanzi, uma igcwalisa ethangini ngemva kokukhululwa kwakhe lapho siwasebenzise.
Amanzi splash futhi splatter uvinjelwe isakhiwo elula uphondo inkomishi kancane offset ngase kuvulwa phansi.
isikhalazo Tebuciko. Zonke amapayipi kufihlwe phansi futhi sihlale bezibona engafinyeleleki.
Lwenza isikhala eyingqayizivele enikeza umuzwa induduzo.
Ukwehlukahluka kwezimangaliso imiklamo ukuthi ukugcizelela ubuntu kanye othile Chic Igumbi sanitary.
The kungenzeka ukubeka izinto zokuhlobisa ukuthi kuhlobisa igumbi.
Abakhiqizi ukunikela sanitary ware nezitsha ngamanzi mpo esidayisa imifanekiso ehlukene. Ububanzi kuhlanganisa izinhlobo eziningana ukwakhiwa.
Kuye amaphuzu okunamathiselwe:
- yangasese ezimfushane ;
- ukumiswa izakhiwo, exhunywe odongeni.
Kusukela ngineminyaka engu-umsebenzisi:
- zangasese abadala;
- ekhethekile zangasese zezingane.
- uphondo standard;
- ngokukhethekile athuthukile design.
On osenyameni ukuphathwa:
- singlemode izinhlelo - abe inkinobho noma ukhiye ukusunduza;
- Uma uyazibuza ukuthi nhloboni yangasese eknomnee, imodeli ezimbili-Imodi, nge inkinobho ecindezelwayo olunjengemfoloko - ephelele. Bavumela ukuze kakhulu ukulondoloza amanzi (amanzi angaba coalesce noma wonke amanzi);
- imininingwane yokuxhumana uhlelo iyatholakala onobuhle eziphambili futhi kuyabiza kakhulu.
Ngokuthenga nezitsha nge outflow mpo yamanzi, kulula ukunikeza egumbini sanitary of indlu ezweni noma ifulethi engavamile Antique design umbono.
Quality ware sanitary ekhiqizwa njengoba ehola izinkampani zakwamanye amazwe (France, e-Italy, eJalimane), futhi Russian. Kusukela yasekhaya - ikakhulukazi babekwazisa imikhiqizo yezinkampani ngokuhlanganyela isiRashiya Italy.
Kuthiwani uma une yokugezela encane
Ulenga yangasese Dama Senso Roca: incazelo, ukubuyekezwa
Yikuphi umnyango yokugezela kungcono ukubeka?
Ngasiphi yobudala kungcono kakhulu ukuba azale ingane yakhe yokuqala: imithi futhi ingqondo
Abashisekela - kuyinto ... ngokweqile sezenkolo
Stye indlela yokuphatha?